त्याे घरकाे खाटमा सहवास कि युद्ध ?
झापा, दमकका ३२ वर्षीय विक्रम (नाम परिवर्तन) ले पारिवारिक दबाबका कारण मागी विवाह गरे। लामो अन्तरालपछि दम्पतीबीच शारीरिक सम्बन्ध कायम भयो। यौनेच्छा हुने तर सन्तुष्टि नपाउने भएपछि उनी भित्रभित्रै तनावमा हुन्थे। बिस्तारै उनको यौनचाहना पनि घट्न थाल्यो। लामो समयसम्म आफ्नो समस्या कसैलाई बताएनन्। ‘तीनचार वर्षपछि उनी परामर्शका लागि मकहाँ आए,’ विक्रमको उपचार गरेका यौन मनोविद् डा. सुबोधकुमार पोखरेलले भने, ‘विक्रममा मानसिक अन्योल थियो। त्यसैले उनले भरपूर यौन आनन्द लिन सक्दैनथे।’ यसरी आफ्ना यौन समस्या लुकाएर बस्दा समस्याको जरो पत्ता लगाउन नसकिने डा. पोखरेलले बताए।
‘विवाहित, अविवाहित, लैंगिक अल्पसंख्यक जोसुकैमा पनि यौन समस्या हुन्छ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘आफूमा यस्तो समस्या भएकाहरू समाज या विभिन्न कारणको डरले खुलेर बोल्न सक्दैनन्। खुलेर आफ्ना समस्या बताउँदा विभिन्न खाले यौन रोग वा यौन समस्याबाट समयमै बच्न सकिन्छ।’ यसका लागि औषधिभन्दा परामर्श उपयोगी हुने उनले बताए।
यौन मनोविद् डा. पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय नेपालीहरू यौनका विषयमा सहजै खुल्ने गरेका छन्। ‘समाजमा आफ्नो लाज हुने या पार्टनरले असहज मान्ला भन्ने भयले मानिसहरू यस्ता समस्या लुकाएर बस्थे,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ परामर्श लिन पनि लुकीलुकी आउँथे। तर, अचेल किशोरकिशोरीदेखि प्रौढहरू पनि खुलेरै आफ्ना समस्या प्रस्तुत गर्न थालेका छन्।’
काठमाडौँ, वसुन्धराका ३९ वर्षीय कृष्ण (नाम परिवर्तन) शिक्षक हुन्। विवाहित उनी एक सन्तानका बाबु हुन्। जुनसुकै उमेरका महिला देख्दा पनि उनको यौनचाहना जाग्थ्यो, किशोरीदेखि वृद्धासम्म। आफूलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्थ्यो। उनी पनि उपचारका लागि आफ्नी श्रीमतीसँग डा. पोखरेलकहाँ पुगे। कृष्णमा मनोसमस्या भएको उनले बताए। ‘यस्तो खाले मनोसमस्या महिला–पुरुष दुवैमा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्या भएका व्यक्ति जानेर÷नजानेर विपरीत लिंगीप्रति सेक्सुअल डिजायर राख्छन्।’ डा. पोखरेलका अनुसार यस्ता समस्या भएका अधिकांश व्यक्ति यौन हिंसामा परेका हुन सक्छन्। ‘यौन हिंसा भन्नाले बलात्कार मात्र होइन,’ उनले भने, ‘अन्य सामान्य रूपमा हिंसामा परेका व्यक्तिमा यस्ता लक्षण देखिन्छन्। उनीहरूमा असामान्य खालको यौन चाहना हुन्छ। यो नै समस्याको रूपमा देखापर्छ। यौन समस्या एउटै भए पनि मान्छेपिच्छे लक्षण भने फरक–फरक देखापर्ने उनले बताए। ‘आफ्नो हाडनाता पर्ने महिलामाथि पनि कृष्णको यौनचाहना हुन्थ्यो, जुन असामान्य लक्षण हो,’ उनले भने। हाल कृष्ण डा. पोखरेलसँग नियमित परामर्श लिइरहेका छन्।
ललितपुरका ४० वर्षीय सरोज (नाम परिवर्तन) लाई आफ्नी श्रीमतीसँग सेक्स गर्न मन लाग्दैन। उनी अन्य महिलासँग शारीरिक सम्पर्क राख्थे। थुप्रैसँग उनको सम्बन्ध बन्यो। उनी पनि डा. पोखरेलकहाँ उपचारका लागि पुगेका थिए। ‘उनी ‘मेरो लिंग नै काटिदिनुस्, मलाई आफैँदेखि घिन लागिसक्यो’ भन्दै आएका थिए,’ डा. पोखरेलले भने, ‘यो पनि एक प्रकारको मनोसमस्या नै हो। जानीबुझी नभई उनीहरू अन्जानमा यस्तो क्रियाकलाप गर्छन्।’ यसले व्यक्तिको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा समस्या पर्ने र सानातिना यौन समस्याले समाजबाट बहिष्कृत हुन सक्ने स्थिति आउने उनले बताए। हाल सरोज पनि डा. पोखरलेकहाँ परामर्शका लागि जान्छन। ‘काउन्सिलिङले उनको समस्यामा सुधार आएको छ,’ डा. पोखरलेले भने।
अस्पतालमा दिनमा सयौं यौनरोगी
काठमाडौँ, सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) मा दैनिक एक सयभन्दा बढी यौन रोग तथा यौन समस्या भएका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको केमसीका वरिष्ठ यौनरोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द पोखरेलले बताए।
‘उपचारमा आउनेमध्ये अधिकांशमा ‘सेक्सुअल्ली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन (एसटीआई) छ,’ डा. गोविन्दले भने, ‘कतिपय भने यौन मनोसमस्या भएर परामर्शका लागि आउँछन्।’ उनका अनुसार यसमा विवाहित र अविवाहितको संख्या उस्तै–उस्तै छ। तर, उपचारका लागि भने महिलाभन्दा पुरुष बढी आउने गरेको उनले बताए। ‘पुरुषको तुलनामा महिलामा यौनरोगको लक्षण ढिला देखापर्छ,’ उनले भने, ‘महिलाले आफ्नो समस्या खुलेर भन्न पनि अप्ठ्यारो मान्छन्। त्यसैले महिलाभन्दा पुरुष बढी आउँछन्। तर, पुरुषमा भन्दा महिलामा यस्तो रोगको जोखिम अत्यधिक हुन्छ।’
नेपाल मेडी सीटी अस्पतालका छाला रोग विभागका प्रमुख डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठले अहिलेका युवा पुस्ताले यौन रोगको विषयलाई अस्पताल लिएर आउनुभन्दा पहिला नै गुगल गरेर आउने बताए। ‘आजभोलि गुगल गरेर आफैँ डाक्टर बन्नेहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘गुगलमा हेर्दा एउटै लक्षण थुपै्र रोगसँग मिल्न सक्छ। त्यसैले गुगलमा हेरेर यौन रोग वा यौन समस्याको उपचार गर्नु भनेको ‘अँध्यारोमा झटारो हान्नु’ जस्तै हो।’ यस्तो प्रवृत्तिले सामान्य समस्या पनि पछि गएर जटिल बन्ने उनले बताए। ‘गुगलमा कुनै यौन रोगको लक्षण आफूसँग मिल्नेबित्तिकै डिप्रेसनमा जाने पनि छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू न जँचाउन जान्छन्, न भ्रमबाट मुक्त हुन नै सक्छन्। कोही त कतिसम्म गर्छन् भने अनलाइन सपिङ गरेर मलमहरू किन्छन्, लगाउँछन् र निको नभएपछि मात्रै अस्पताल आउँछन्।’
यौन रोग र समस्याका विषयमा धेरै बिरामीले ‘डाक्टर सपिङ’ गर्ने गरेको उनले बताए। ‘एउटा डाक्टरकोमा गयो, एउटा कुरा सुन्यो, अर्को डाक्टरकोमा गयो, अर्को कुरा सुन्यो,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘त्यसलाई हामी ‘डाक्टर सपिङ’ भन्छाँै। उनीहरूको दिमागले सानो समस्यालाई पनि ठूलो बनाइदिएको हुन्छ र हत्तपत्त कसैको कुरामा विश्वास गर्दैनन्।’
‘कमन’ यौन जिज्ञासा
यौन समस्यालाई लिएर चिकित्सकहरूलाई बारम्बार सोधिने केही जिज्ञासा यस्ता छन्ः
१) यौन सम्पर्कका बेला मेरो वीर्य चाँडै स्खलन हुने गरेको छ। श्रीमती बेलाबेलामा झर्किने गर्छिन्। यौन सम्पर्कको अवधि कति हुनुपर्ने हो ? शीघ्र पतन रोक्ने केही उपाय बताइदिनुभए आभारी हुने थिएँ।
२) म २५ वर्षीय युवा हुँ। सम्भोगको इच्छा र चाहना हुँदाहुँदै पनि सेक्स गर्न सक्दिनँ। मेरो लिंग कडा नै हुँदैन। तीन वर्षदेखि मलाई यो समस्या भएको हो। म के गरूँ ?
३) हाम्रो बिहे भएको पाँच वर्ष भयो। हामी सुखी थियौँ। तर, अहिले उहाँ असाध्यै पिउनुहुन्छ। एक वर्षदेखि उहाँले मलाई यौनसुख दिन सक्नुभएको छैन। उहाँमा यौन चाहना नै छैन। कहिलेकाहीँ कोसिस गर्नुहुन्छ तर उहाँको लिंग उत्तेजित नै हुँदैन। केही सीप नलागेपछि त्यत्तिकै सुत्नुहुन्छ। आजभोलि त मलाई झर्को लाग्ने, सानो–सानो कुरामा रिस उठ्ने हुन्छ। अझ बेलुका व्यर्थको कोसिस गर्दा म कराइदिन्छु। के गर्ने होला ? उहाँको उपचार हुन सक्ला ?
४) म २५ वर्षीय युवा हुँ। सम्भोगको इच्छा र चाहना हुँदाहुँदै पनि सेक्स गर्न सक्दिनँ। मेरो लिंग कडा नै हुँदैन। तीन वर्षदेखि मलाई यो समस्या भएको हो। त्यसअघि मैले दुईतीन पटक सम्पर्क गरेको थिएँ। तर, हतारहतार र डराई–डराई सेक्स गरेकाले मैले मेरो पार्टनरलाई सन्तुष्टि दिन सकिनँ। मलाई हीनताबोध हुँदै गयो। र, सेक्स भन्नेबित्तिकै मेरो सातो जान थाल्यो।
यौनसमस्यासँग जोडिएका यस्ता अधिकांश समस्या मनोवैज्ञानिक भएको बताउँछन्, मनोचिकित्सक डा. रवि शाक्य। तर, नेपालमा यौन मनोविद्को अभाव छ। डा. शाक्य भन्छन्, ‘छाला तथा यौन रोग विज्ञहरूले नै यौन समस्याको पनि उपचार गरिरहेका छन्। केही एमबीबीएस गरेका र सेक्ससम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएकाले आफूलाई सेक्सोलोजिस्ट भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्।’ उनका अनुसार सेक्सोलोजिस्ट तथा सेक्स थेरापिस्टको अभावसँगै नेपालमा यौन दुर्बलता हटाउने र ‘सेक्स पावर’ बढाउने भन्दै धन्दा चलाउनेहरूको व्यापार दिन प्रतिदिन फस्टाइरहेको छ। डा. शाक्य भन्छन्, ‘सेक्समा सन्तुष्ट हुन नसकेका तथा आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्ट बनाउन नसकेकाहरू क्षणभरमै सेक्स समस्या छुमन्तर हुने भ्रमको पछि लागेका छन्, तर उनीहरूले सही परामर्श पाउन सकेका छैनन्।’
डा. शाक्यका अनुसार जिज्ञासा नं. १ मा उल्लेख गरिएको समस्या शीघ्र स्खलनसम्बन्धी समस्या हो। ‘सेक्स अवधि यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै मापदण्ड छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, धेरै मानिस अहिले पनि शीघ्रपतन तथा ढिला पतनको विषयमा सोचेर दिन बिताइरहेका हुन्छन्। साथीहरूको बीचमा कुरा हुँदा ‘मेरो त यार कहिलेकाहीँ एक घण्टासम्म पनि जान्छ’ भन्दै गफ चुट्ने अनि पोर्न फिल्ममा देखाइएको जस्तै लामो समयसम्म यौन सम्पर्क गर्न खोज्नेहरू थुप्रै छन्। जुन रियल सेक्स लाइफमा सम्भव छैन।’ उनका अनुसार शीघ्र स्खलनको समस्या प्रायः सबैले अनुभव गरेका हुन्छन्। भन्छन्, ‘चाँडो वीर्य स्खलन हुने समस्या सापेक्षिक कुरा हो। यसलाई परिभाषित गर्न गाह्रो छ। स्वस्थ व्यक्तिको तीन मिनेटमै वीर्य स्खलन हुन्छ भने शीघ्र स्खलन भएको ठान्ने व्यक्तिले २.५० सेकेन्डमा वीर्य स्खलन हुँदा पनि शिकायत गर्न थाल्छन्।’
तुलनात्मक रूपमा महिलालाई चरम सुखमा पुग्न ढिलो हुने भएकाले पुरुषले शीघ्र स्खलनको अनुभूति गर्ने डा. शाक्य बताउँछन्। भन्छन्, ‘कतिपयले भने वीर्य स्खलनअगाडि आउने रसलाई वीर्य ठान्ने र यौन फिल्ममा देखाइएको लामो यौनकार्यको दृश्यबाट प्रभावित भई आफूमा शीघ्र स्खलन भएको शंका गर्छन्।’ अवधिलाई लिएर अनावश्यक चिन्ता गर्नु व्यर्थ भएको उनी बताउँछन्। ‘आफ्नो यौन पार्टनरसँग राम्रोसँग फोरप्ले गरिएको छ, उनलाई राम्रोसँग उत्तेजनामा ल्याइएको छ भने एकदेखि तीन मिनेटसम्म इन्टरकोर्स गर्दा पर्याप्त हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पार्टनर देख्नेबित्तिकै बाघले शिकार झम्टेको जस्तै गरी झम्टिने हो भने दुवैको सेक्स लाइफ बिग्रन्छ। महिलाहरूमा ढिलो उत्तेजनामा आउने र ढिलै शान्त हुने भएकाले उनीहरूमा उत्तेजना केही समय स्थिर रहन्छ।’ प्राक्क्रीडामा जति बढी महिलालाई उत्तेजनामा ल्याउन सक्यो, यौन सम्पर्कका बेला त्यति नै बढी आनन्द प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
शीघ्र स्खलन नियन्त्रण सम्भव भएको डा. शाक्य बताउँछन्। यौनसम्पर्कको क्रममा वीर्य स्खलन होलाजस्तो भयो भने लिंग बाहिर निकाल्ने अनि फेरि चालु गर्ने, पार्टनरको अंगमा ध्यान नदिने, यौन क्रीडा रोकेर ध्यान अर्कैतर्पm मोड्ने, महिला माथि पुरुष तल भएर यौन क्रीडा गरेमा स्खलन ढिलो हुने हुनाले आसन परिवर्तन गर्ने, स्खलन हुन लाग्दा पार्टनरलाई गति कम गर्न संकेत गर्ने, स्खलन होलाजस्तो भयो भने लिंगको फेदमा अँठ्याउने, अण्डकोष र मलद्वारबीचको वीर्यनली थिच्ने, कम चिप्लोयुक्त बाक्लो खालको कन्डम प्रयोग गर्नेजस्ता विधि अपनाए शीघ्र स्खलनको समस्या बिस्तारै हट्ने डा. शाक्य बताउँछन्। यसका साथै लिंगवरिपरिको मांसपेशीको कसरत, हस्तमैथुन गर्दागर्दै वीर्य स्खलन रोक्ने अभ्यासले पनि शीघ्र स्खलन घटाउन सकिने उनको भनाइ छ। ‘यसका लागि दृढ अठोट एवं धैर्यका साथै पार्टनरको सहयोग र समझदारी पनि आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यौन समस्याको तुः समाधान गर्ने भनेर प्रचारप्रसार गरेर बसेकाहरूले यी सबै कुरा बताउँदैनन्। उनीहरू शीघ्र पतन रोक्ने भन्दै महँगा औषधि भिडाएर मानिसलाई ठग्छन्।’
डा. शाक्यका अनुसार जिज्ञासा नम्बर ३ र ४ मा उल्लेख गरिएका समस्या ‘इरेक्टाइल डिस्फंक्सन’ हुन्।
चिन्ता, हीनताबोध र मानसिक तनावले यस्तो समस्या हुने गर्छ। यसको उपचार सम्भव छ। यसका लागि मनोविदसँग परामर्श लिनुपर्छ। लिंग कडा पार्ने औषधि सेवन गरेर, चिकित्सको परामर्शबिना भायग्रा सेवन गरेर मात्र यो समस्याबाट छुटकारा पाउन नसकिने डा. शाक्य बताउँछन्।
उल्लेख गरिएका समस्यामा अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण यौन क्षमतामा कमी आएको हो। यसका लागि सबैभन्दा पहिला मनोचिकित्सकसँग उपचार गराएर मदिरा सेवन गर्ने बानी छुटाउनुपर्ने डा. शाक्य बताउँछन्। ‘मदिराको कुलतबाट उम्किन सकियो भने यौन चाहना र क्षमता दुवैमा वृद्धि हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण ‘इरेक्टाइल डिस्फंक्सन’ को समस्या हुन्छ। धेरै रक्सी खाने पुरुषलाई यौन उत्तेजनाको समस्या हुन्छ।’ मदिरा सेवनपछि सेक्स अवधि लामो हुन्छ भन्ने भ्रमको पछि लागेर मदिराको मात्रा बढाउँदै जानेमा यस्तो समस्या देखापर्ने डा. शाक्य बताउँछन्। ‘यस्तो समस्या भएकालाई रक्सीमा यार्चागुम्बा डुबाएर त्यो रक्सी सेवन गर्दा यौन चहना र क्षमता पनि बढ्छ भनेर गलत सल्लाह दिएको पनि पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो एकदमै खराब कुरा हो। यसले समस्यालाई अझै विकराल बनाउँछ।’
डा. शाक्य खाटमा जाँदा युद्ध गर्न जानेजस्तो पुरुष मनस्थितिका कारण पनि धेरैको यौन जीवन रुग्ण भएको बताउँछन्। उनको प्रश्न छ, ‘खाटमा सहवास गर्न जाने कि युद्ध गर्न जाने हो ?’
जति धेरै पार्टनर, उति धेरै रोग
केही महिनाअघि विदेशबाट फर्किएका एक जना युवा उपचारका लागि यौनरोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द पोखरेल कहाँ आए। विदेशमा हँुदा उनी उपचार नगरी आफ्नो समस्या लुकाएर बसेका थिए। चेकजाँचका क्रममा ती युुवामा ‘हेपाटाइटिस बी’ देखापर्‍यो। ‘उनमा सामान्य इन्फेक्सन बल्झेर हेपाटाइटिस बी भएको थियो,’ डा. गोविन्द सुनाउँछन्, ‘पछि पत्ता लाग्यो, उनका एकभन्दा बढी सेक्स पार्टनर रहेछन्।’ एकभन्दा बढीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा मानिस यौनरोग र यौन समस्याको शिकार हुने उनी बताउँछन्। ‘एउटै पार्टनरसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा रोग सर्ने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै सेक्स पार्टनर हुँदा रोगसँगै यौनका अन्य समस्या पनि देखिन थाल्छन्।’
वर्षमा १२ चोटि जाँच
डा. गोविन्दकहाँ एक दिन ३५ वर्षीय रामसुन्दर (नाम परिवर्तन) परामर्शका लागि आए। ‘उनले चिनजानकी एक जना महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध राखेछन्,’ डा. गोविन्दले भने, ‘ती महिला कुनै पेशेवर यौनकर्मी थिइनन्। तर, रामसुन्दरलाई यौन रोग लागेको भ्रम पैदा भएछ।’ रामसुन्दरले वर्षमा १२ पटकभन्दा बढी चेकजाँच गराइसके। तर, उनको डर रत्तिभर कम भएको छैन। उनी निकै ठाउँमा मनोपरामर्श लिन पनि गइसके। अहिले पनि उनलाई यौन रोग लाग्यो कि भनेर दिनरात सताइरहन्छ । ‘हामीले केही भएको छैन भनेर रिपोर्ट हातमा थमाइदिँदा पनि उनले हाम्रो विश्वास गरेका छैनन्,’ डा. गोविन्दले भने।
डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठकहाँ एक जना बिरामी आए। ‘धेरै समयदेखि उनी मानिसक रोग लाग्यो भनेर मानसिक अस्पताल धाइरहेका रहेछन्,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘जाँच गरेर हेर्दा उनमा भिरिंगी भएको रहेछ। उपचारपछि उनी शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा निको भए।’
टेकु अस्पतालमा सरुवा रोगका बिरामी बढी आउँछन्। तीमध्ये दिनमा आठदश जना यौनरोग वा यौन समस्या भएका व्यक्ति आउँछन्। समस्या लिएर आउनेमध्ये अधिकांश पुरुष हुने गरेको टेकु अस्पतालका यौनरोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोला बताउँछन्। उनका अनुसार शीघ्र स्खलन, उत्तेजनाविहीनतालगायत समस्या भएका पुरुषहरू अस्पतालमा बढी आउँछन्। त्यसका साथै यौनकै कारण मनोसमस्या भएका बिरामीहरू पनि आउने उनी बताउँछन्। ‘हामीकहाँ आउने प्रायः पुरुष बाहिर शारीरिक सम्बन्ध राख्छन् र आफूलाई यौनरोग लाग्यो कि भन्दै महिनैपिच्छे जाँच गराउन आउँछन्,’ डा. बास्तोला भन्छन्, ‘तर, उनीहरूलाई कुनै रोग हुँदैन। थप उपचार गर्नु नपर्ने भन्दै हामी बिदा गरिदिन्छौँ। तर, उनीहरू फेरि जँचाउन आइपुग्छन्।’
यसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘भेनेरोफोबिया’ भनिने डा. बास्तोला बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो यस्तो खालको फोबिया अर्थात् एन्जाइटी हो, जसमा कुनै व्यक्ति आफ्नो यौन चाहना पूरा गर्छ र कुनै यौनरोग लाग्यो कि भनेर शंका गर्छ।’ यसबाहेक अन्य यौन समस्या भएर आउने बिरामी पनि रहेको उनी सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘अहिले एमएसएम (मेल ह्याभिङ सेक्स विद मेल) का बिरामी धेरै छन्। उनीहरू होमोसेक्सुअल भएकोले यौनांगमा मुसा र मासु पलाउने समस्या हुन्छ।’
सेक्स समस्या लिएर चिकित्सककहाँ पुग्ने अधिकांशको चिन्ता सन्तुष्टि पाउन नसकेको, यौन सम्पर्कका बेला शीघ्र स्खलन हुने गरेको, लिंगमा उत्तेजना नआउने गरेको आदि हुन्छन्। लिंगको आकार, शीघ्र स्खलन, हस्तमैथुनको असरलगायत विषयमा जिज्ञासा राख्ने र श्रीमतीलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन कि भनेर मनमा डर पालेर बसिरहेका धेरै युवा परामर्शका लागि आउने गरेका चिकित्सकहरू बताउँछन्।
डा. सुबोधकुमार पोखरेलका अनुसार यौनका केही आम समस्या छन्। जस्तैः पुरुषमा लिंग कडा नहुने, शीघ्र पतन हुने, यौन इच्छा कम हुने, केहीलाई सामान्यभन्दा बढी यौन चाहना हुने आदि। महिलामा योनि सुक्खा हुने, यौन चाहना नहुने, सेतो पानी बग्ने अनि केहीमा यौन चाहना सामान्यभन्दा बढी हुने।
यौन जीवन सुमधुर बनाउन फोरप्ले पर्याप्त गर्ने, पार्टनरको समस्या र इच्छा बुझ्ने, भावनात्मक सम्बन्ध बलियो बनाउने, पार्टनरलाई मन पर्ने र मन नपर्ने कुरा थाहा पाएर त्यहीअनुसार व्यवहार गर्ने, दुवैलाई सहज लाग्ने पोजिसन र स्थान अपनाउने, पोजिसन र स्थानमा नयाँपन ल्याउने आदि उपाय अपनाउनुपर्ने डा. पोखरेलको सुझाव छ।
खुल्दै छ समाज
यौन रोग र समस्याका बारेमा मानिसहरू पहिलेभन्दा खुल्न थालेको डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘पहिला मानिसको कुरा कोट्याउन एक घण्टा हिस्ट्री लिनुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जस्तो समस्या आए पनि सबैले खुलेर आफ्ना समस्या राख्छन्। लुकाएर अन्तिम अवस्थामा आउनेहरू पहिलाभन्दा अहिले घटेका छन्।’
सेक्सोलोजिस्ट डा. बद्रीप्रसाद भट्टराईकहाँ दैनिकजसो २०÷२५ जना बिरामी यौनको समस्या लिएर आउँछन्। ‘योनि खुकुलो भयो अब के गर्ने ? हस्तमैथुनका बेफाइदा केके छन् ? महिलामा चरम आनन्द भएको कसरी थाहा पाउने ? वीर्य सेवन गर्दा के हुन्छ ? गर्भवती अवस्थामा सेक्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर प्रत्येक दिन मानिसहरू आउने गरेका छन्,’ डा. भट्टराई भन्छन्। उनी हाल मान्छेहरू यौनको विषयमा खुल्न थालेको बताउँछन्। ‘अपेक्षित रूपमा मानिसहरू अझै यौनका विषयमा खुल्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पहिलेको तुलनामा समाज बिस्तारै खुल्दै छ।’
डा. गोविन्दकहाँ पनि आजभोलि यौनरोगीहरू खुलेर आउन थालेका छन्। ‘पहिलेको तुलनामा मानिसहरू चिकित्सकसँग खुलेर आफ्ना समस्या बताउन थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पुरुषको तुलनामा महिलाहरू यस्ता कुरामा प्राइभेसी राख्न खोज्छन्।’
अधिकतर यौन गुनासा
महिला र किशोरीका अधिकतर यौन गुनासामा यौन सम्पर्क पीडादायी हुने, योनि सुक्खा हुने, योनि चिलाउने, पिसाब पोल्ने, सेतो पानी बग्ने, यौनेच्छा कम हुने गरेका छन्। कतिपयलाई वीर्यसँग घिनै त होइन, अलिक असहज लाग्ने पनि हुन्छ। यौन सम्पर्कअगाडिको यौन क्रियाकलाप अर्थात् ‘फोरप्ले’का लागि पर्याप्त मात्रामा समय दिइएन भने यौन उत्तेजनाका क्रममा योनिरस पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन नसक्दा पनि योनि सुक्खा भएर यौन सम्पर्कको क्रममा विशेषतः महिला पार्टनर वा किशोरीलाई पीडा हुन जान्छ। किनकि, योनिरसले योनिमार्गलाई चिप्लो र मुलामय बनाएर यौनक्रिया सहज बनाउँछ। कतिपय किशोरीमा भने महिनावारीको क्रममा पाठेघरको भित्री तहभन्दा बाहिर रगत जम्ने समस्या (इन्डोमेट्रिओसिस) को कारणले पनि पीडादायी यौन सम्पर्क हुनुका साथै महिनावारी हुँदा अचाक्ली तल्लो पेट दुख्ने, महिनावारी गडबड हुने, दिसा–पिसाब गर्दा पनि पीडा हुने हुन्छ।
अविवाहित अथवा यौन सम्पर्क नराखिसकेको उमेरमा भन्दा यौन सम्पर्क राख्न थालेपछि यौनक्रियाकै कारण वा यथोचित सरसफाइको कमीमा योनि चिलाउने, सेतो पानी बग्ने र पिसाब पोल्नेजस्ता समस्या हुन सक्छन्। नवविवाहित महिला अक्सर यस्तै गुनासो लिई चिकित्सककहाँ आउँछन्। यस्तो समस्या दोहोरिरहेमा यौनक्रियापूर्व दुवै जनाले पिसाब एकसरो फेर्ने, यौन क्रियाअघि पुरुष पार्टनरको यौनांगो टुप्पासम्मै राम्ररी सफा गर्न लगाउने, यौनक्रियापछि महिला पार्टनरले औँला छिराई यौनांग सफा गर्नुका साथै फेरि एक पटक पिसाब फेर्ने, भित्री पहिरनहरु नियमित फेर्ने गरेमा योनि चिलाउने तथा पिसाब पोल्ने समस्या हट्छ।
विवाहको केही समयपछि कतिपय महिलामा यौनेच्छा कमी हुने गरेको पाइएको छ। एकान्तको अभाव, जागिरसँगै घरको कामको थकान, महिनावारी पूर्वको तनावका कारण यौनकार्यमा मज्जा लिन नपाएको गुनासो सुनिन्छ। आफूलाई इच्छा नहुँदानहुँदै पनि यौनकार्यमा सहभागी हुनुपर्दा पनि यौनदेखि वितृष्णा जागेको गुनासो पनि सुन्न पाइन्छ।
पुरुषका हकमा शीघ्र स्खलन, यौनांग उत्तेजनामा नआउने समस्या (इरेक्टाइल डिस्पंmक्सन) आदि समस्या देखिन्छ। यौनक्रियाअगावै कल्पना गरेर बस्ने वा यौनसम्बन्धी सोचिराख्ने व्यक्तिमा शीघ्र स्खलनको समस्या हन्छ। त्यसै गरी हतारमा, निकै यौन आवेशमा वा डरका बीच सम्पर्क राख्न खोज्दा पनि शीघ्र स्खलनको समस्या हुन सक्छ। मानसिक समस्याका कारणका साथै गोपनीयताको कमी, आत्मविश्वासको कमी तथा पहिले पनि यौन सम्पर्क राख्न खोज्दा असफल भएकामा यौनांग उत्तेजनामा नआउने र उत्तेजनालाई कायम गरेर राख्न नसक्ने समस्या हुन्छ। यस्ता समस्या भएकालाई पटक–पटकको मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक हुन्छ। र, शीघ्र स्खलन तथा यौन उत्तेजनामा समस्या भएकाले प्राक्क्रीडाको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।
कन्डम प्रयोगले यौन आनन्दमा कमी आउने भने आ–आफ्नो अनुभूतिको कुरा हो। कन्डमको फाइदाको सवालमा यसले यौनानन्द कम गर्छ भन्ने धारणा गौण हो।
सही तरिकाले भण्डारण गरी नबिग्रिएको र म्याद नगुज्रिएको कन्डम ठीक तरिकाले लगाइएको छ भने कन्डम फुट्ने सम्भावना हुँदैन। कन्डमलाई विसर्जन गर्नुअघि फुटे÷नफुटेको राम्ररी जाँच गर्नुपर्छ। कन्डम फुटेको भए आकस्मिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुपर्छ।
दुवै पार्टनरले गर्ने यौन गुनासोमा सुरुवाती यौन सम्पर्क आशा गरेबमोजिम वा सोचेजस्तो सफल नहुने र यौन कार्यको क्रममा चरमसुख प्राप्त गर्न गाह्रो हुने रहेका छन्। पोर्न धेरै हेर्ने र यौनसम्बन्धी धेरै सोच्ने व्यक्तिहरुले यौन अपेक्षा बढी राख्ने गरेको पाइन्छ। तर, फिल्म र वास्तविक जीवनमा भिन्नता हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। त्यसै गरी, पहिलो प्रयासमै सफलता मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन। पटक– पटकको प्रयासबाट बिस्तारै यौन सन्तुष्टिमा वृद्धि हुँदै जाने हो।
महिला र पुरुषबीचको उत्तेजना एवं चरमसुखको फरकपनका कारण प्राक्क्रीडाको छुट्टै महत्त्व छ। यस विषयमा पुरुष पार्टनरले बढ्ता बुझ्नु जरुरी छ। प्राक्क्रीडाको क्रममा एकअर्कालाई सुम्सुम्याउनेदेखि चुम्बन गर्ने, अँगालो मार्ने, हल्का चिमोट्ने, टोक्ने, दबाउने, काउकुती लगाउने कार्य गर्न सकिन्छ। मधुरो प्रकाश, हल्का पफ्र्युम, सुमधुर संगीतले थप मादकता प्रदान गर्छ।
‘यौन रोग र यौन समस्या फरक हुन्’
डा. सुबोधकुमार पोखरेल, यौन मनोविद्
यौन रोग र यौन समस्या नितान्त फरक कुरा हुन् । यौन रोग भनेको सरुवा, वंशाणुगत हुन सक्छ। भाइरस र लुतो आदिबाट लाग्छ। जसको औषधि उपचार गराउनैपर्छ। कतिपय यौन रोग निको पार्न सकिन्छ भने कतिपय रोगको उपचार छैन।
यौन समस्या भनेको चाहिँ बहुआयामिक पक्षबाट व्यक्तिको यौनेच्छामा देखापर्ने समस्या हो। यसलाई मनोसमस्या पनि भनिन्छ। यौनेच्छा हुने, तर उत्तेजनामा कमी भयो भन्दै आउने बिरामी धेरै हुन्छन्। शारीरिकसँगै यौनको विषयमा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि आउँछन्। हर्मोन, कोलेस्टेरोल, रक्तसञ्चारमा कमी लगायत शारीरिक कारणले यौन समस्या ल्याउँछ। त्यस्तै, असुरक्षाको भाव, यौन हिंसा, असन्तुलित मानसिक अवस्था र उमेर बढ्दै जाँदा यौनेच्छामा कमी हुँदा मनोवैज्ञानिक समस्या आउँछन्। मनोवैज्ञानिक कारणले पुरुषमा भन्दा महिलामा यौन समस्या बढी हुन्छ। सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पनि यौन समस्याका बहुआयामिक कारण हुन्।
यौनको हिसाबमा तेस्रोलिंगी, ट्रान्सजेन्डर, होमोसेक्सुअललगायत अल्पसंख्यक लैंगिकता भएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। किनकि, उनीहरूलाई हाम्रो समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण खराब छ। सोही डरले उनीहरूले आफ्ना समस्या लुकाउँछन् र झनै पीडित बन्छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले यौनका विषयलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। जसका कारण विगतको तुलनामा मानिसहरू आफ्ना समस्या लिएर आउँछन्। उनीहरू आफ्ना यौनका विषयमा उत्सुक देखिन्छन्। मानवीय यौनिकता एक व्यावहारिक र बहुआयामिक पक्ष भएकाले परामर्शद्वारा यसको उपचार गर्न सकिन्छ। लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि समाज र राज्यले केही न केही गर्नुपर्छ। हैन भने समस्या झन् थपिँदै जान्छन्। सम्पूर्ण साप्तहिक
याे पनि पढ्नुहाेस् - यौन जोडीका लागि जाडो मौसम उत्तम मानिन्छ। नेपाली समाजमा जाडोबाट बच्ने तीन उपाय अपनाउन सकिने कथनै छ। जाडोबाट बच्ने राम्रो उपाय न्यानो कपडा। दोस्रोमा आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने तथा वातावरणकुलिन न्यानो कोठामा बसेर जाडोबाट बच्न सकिन्छ। जाडोबाट बच्ने तेस्रो विकल्प हो, यौन जोडीबीचको यौन सम्पर्क। जाडो मौसममा यौन जोडीबीच यौन क्रिडा, यौन सम्पर्कजस्ता क्रियाकलाप गर्नाले शरीर तात्ने भएकाले जाडोबाट बच्न सकिन्छ। जाडौ मौसममा यौन सम्पर्क गर्दा यौन जोडीका लागि विशेषगरी तीन फाइदा हुन्छन्। पहिलो कुरा त ‘यौन सम्पर्कका लागि जाडो मौसम स्वस्थकर मौसम हो,’ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ। नेपाली समाजमा जाडो मौसममा बढी विवाह हुनुलाई यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।
यौन जोडीबीच यौन सम्पर्कको समयमा कामोत्तेजना हुने भएकाले व्यक्तिको शरीरको प्रतिरक्षाप्रणाली बढ्छ। यो मौसममा महिलाको प्रजनन् क्षमतासमेत मजबुत हुन्छ। यो दृष्टिले हेर्दा पनि जाडो मौसम यौन सम्पर्कका लागि उपयुक्त मौसम हो भन्न सकिन्छ। जाडो मौसममा विशेषगरी महिला प्रजनन्शील हुने भएकाले महिलामा रजश्वलाको एैठनका साथै आक्रान्त हुने समस्या कम हुन्छ। त्यसैले यो मौसममा यौनजोडीबीच यौन उन्माद हुनु स्वाभाविकै हो। रजश्वलाको समयमा बेचैनी तथा अशान्तपनलाई शान्त गर्न यौन जोडीको अभावमा हस्तमैथुन गर्न सकिन्छ। यौन जोडी वा आफैँ हस्त मैथुन गर्न सकिन्छ। हस्तमैथुन यौनानन्द लिने स्वाभाविक पक्रिया हो। यो विर्य स्खलनको उपयुक्त मौसमसमेत हो। गर्मी मौसममा जाडो मौसमको तुलनामा पुरुषको शुक्रकिटको संख्या केही बढी र चलायमान हुन्छन्। जाडो मौसममा दिन छोटा र रात लामा हुने भएकाले यौन जोडीबीच आत्मियता, माया, प्रेम साट्नुका साथै यौन सम्पर्कका लागि प्रशस्त समय हुन्छ। जाडो मौसमको चिसो रातमा यौन जोडी धैर्यताका साथ आनन्दले यौन क्रिडा तथा सम्पर्क गर्न रुचाउँछन्। त्यसैले जाडो मौसमलाई यौनका लागि उत्तम मौसम मानिन्छ। चिकित्सकीय शरीर विज्ञानअनुसार जाडो मौसम यौनका लागि उत्तम रहेको प्रमाणित रहेको छ।
जाडो मौसममा काखमा बस्नु, अँगालोमा रमाउनुजस्तो स्वर्गीय आनन्द के हुन सक्छ र ! यौन जोडीले यस्तो अवसर पाएको अवस्थामा अवस्य स्वर्गीय आनन्द लिन सकिन्छ। संसारभर नै यौन क्रियाकलाप तथा अभद्रता प्रायः जाडो मौसममै बढी भएको पाइन्छ। यौन सम्पर्क हुनुपूर्व मात्रै हैन। यौन सम्पर्कपछि यौन जोडीबीच अँगालोमा बस्नु विशेषगरी जाडो मौसममा आनन्दमयी हुन्छ। शरीर न्यानो र मनतातो वातारण आवश्यक हुन्छ। जाडो मौसममा अंकमाल गर्दा शरीर त न्यानो हुन्छ नै यौन जोडीबीचको आत्मियतामा अझ प्रगाढता आउँछ। जाडो मौसममा पिकनिक तथा घुमघाम गर्न जानुको उद्देश्य पनि जाडो मौसममा यौन जोडीका लागि उपयुक्त मौसम हो। जाडोमा घुमघाम गर्नुको विभिन्न आनन्ददायी कारणमध्ये यौन पनि एक हो। जाडो मौसममा शैक्षिक संस्थामा केही दिन छुट्टीसमेत दिइन्छ। अधिकांश व्यक्तिले छुट्टीको मौसमलाई आनन्द, प्रशन्नता, इच्छा, हर्षका साथै इन्द्रिय शुखकारुपमा लिइन्छ। त्यसैले यो मौसमलाई विपरीत यौन जोडीलाई यौन सम्पर्कका लागि प्रस्ताव गर्ने उचित मौसमसमेत हो। त्यसैले यो मौसम यौन जोडीका लागि दिव्य मौसम हो।
जाडो मौसममा दिन छोटा हुने भएकाले ‘मौसमी उत्तेजित अक्रमबद्धता’ हुन्छ। मौसमी उत्तेजनाले यौन सम्पर्कमा समेत बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। यसको अर्थ जाडो मौसममा व्यक्तिमा मानसिक समस्याको जोखिमसमेत नहुने हैन। यो मौसममा व्यक्ति, छिटो रिसाउने, उत्तेजित भैहाल्नेजस्ता समस्या हुन सक्छन्। यसमा भने व्यक्ति सचेत हुन आवश्यक छ। अब भन्न सकिन्छ कि, जाडो मौसममा यस्तो ‘मौसमी उत्तेजित अक्रमबद्धता’ भएको अवस्थामा यौनजोडीका लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ। मानसिक सन्तुलनमा असर पुगी यौन सन्तुलनसमेत बिग्रिन सक्ने भएकाले यसमा यौन जोडी सचेत हुन आवश्यक छ। जाडो मौसममा हाम्रो शरीरमा सूर्यका किरण कम पर्ने भएकाले हाम्रो शरीरमा भिटामिन ‘डी’ को कमी हुन सक्छ। त्यसको परिणामस्वरुप व्यक्तिको शरीर अल्छि हुने तथा काममा चाख नलाग्ने जोखिम हुन्छ। यस्तो समस्याको समाधानको सहयोगीका रुपमा यौन सम्पर्कको भूमिका हुन्छ। यौन सम्पर्कले व्यक्तिमा स्फूर्ति ल्याउन सहयोग पुग्छ। आनन्दमयी यौन सम्पर्कका कारण अक्सिटोसिन, इन्डोरफिनहरुजस्ता खुसी दिने हार्मोन निस्कासन हुन सहयोग पुग्छ। जसले व्यक्तिलाई तनाव कम गर्न सक्छ। यौन क्रियाकलाप तथा यौन सम्पर्कको क्रममा यस्ता खुसी दिने किसिमका हार्मोन बढी सक्रीय हुन्छन्। जसले यौन जोडीबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहायक भूमिका खेल्छ। यौन सम्पर्कलाई आनन्द बनाउन प्राथमिक भूमिका भने यौन जोडीबीचको शरीरको गन्ध र वासनाले भूमिका खेल्छ। यौन जोडीबीचको आनन्दमयी यौन सम्पर्कले यौन जोडीबीचको तनाव तथा दबाबबाट समेत छुट्कारा दिलाउँछ।